Umuthi 'Hepa-Merz "eyisidalwa esinenkululeko hepatoprotective. Umuthi kukhishelwa njengoba CONCENTRATE isisombululo ukumnika kanye granules womshini isixazululo kwezokuphatha ngomlomo.
Umuthi 'Hepa-Merz ". incazelo
Isithako esebenzayo izenzo L-ornithine-L-aspartate phezu zamagama urea kanye glutamine usebenzisa ama-amino acid kanye aspartate ornithine. Lezi zifundo yembula ukuthi zamagama anda glutamine kunciphisa okuqukethwe ammonia. Kwezinye izimo, ngcono isilinganiso branched futhi elimnandi amino acid.
Ukulungiselela ngcono ukukhiqizwa hormone ukukhula kanye insulin ikhuthaza amaprotheni exchange kwezinhlansi pathologies lapho isidingo umsoco parenteral.
Medicine "Hepa-Merz" (powder for umjovo) ezinqunyiwe izifo oyingozi futhi ezingalapheki isibindi, hyperasotemia eziyinkimbinkimbi (izilonda anobuthi, steatosis, isifo sokusha, i-hepatitis). Ngu izinkomba futhi zihlanganisa hepatic encephalopathy (ayishilo futhi esicashile), ikakhulukazi ukwelashwa nge ukuphazamiseka ukwazi (precoma noma ikhoma).
A granulate ngokukhiqiza isixazululo kwezokuphatha ngomlomo "Hepa-Merz" Isicelo User uncoma Ukuhlukumeza detoxifying isibindi umsebenzi (uma kuqhathaniswa utshwala noma ukudla ngokweqile).
I elimbudumbudu ziyoncibilika 200 namamililitha uketshezi. Zigwinye izindlela "Hepa-Merz" yokusetshenziswa Kunconywa kathathu ngosuku ngemva kokudla. Umthamo ngesikhathi esifanayo - amagremu ezintathu kuya kweziyisithupha (izikhwama elilodwa noma amabili).
Intravenous ukumnika ukulungiselela "Hepa-Merz" imfundo manual incoma zaphathwa amagremu amabili ngelanga (ampoules amane). Gxila izidakamizwa ziyoncibilika namamililitha 500 isixazululo ukumnika. Iziguli ezinokuphazamiseka ukwazi (equlekile noma precoma) evumelekile ukwethulwa izitsha eziyisikhombisa ngosuku kuze kube eyisishiyagalombili (based ngobubi). 500 ml isixazululo ukumnika Kunconywa ukuncibilikisa ezingeqi kwezingu izitsha eziyisikhombisa eziyisithupha.
Ukuvuza ukulungiselela "Hepa-Merz" imfundo manual incoma ukuthi ngesikhathi amagremu amahlanu ngehora. Isikhathi kanye nokuvama ukumnika, kanye isikhathi sokwelashwa kunqunywa ngamunye. Lapho kahle umsebenzi sesibindi ukuvimbela nesicanucanu retching abaphathi kufanele ivunyelaniswe ijubane isiguli.
Ekwelapheni izingane ukugxilisa ingqondo isixazululo ukumnika isimiso sokuqondisa 'Hepa-Merz "awusebenzi.
Umuthi is contraindicated esigabeni obukhulu ukwehluleka kwezinso, hypersensitivity.
Prakthiza ebonisa ukuthi umuthi ibekezelelwe kahle kuhambisana izilinganiso zokwelapha. Okungenzeka izigameko ezingezinhle ezavela nge ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Hepa-Merz" imfundo on isicelo amanothi komzimba, isicanucanu noma ukuhlanza (ezingavamile). Ngokuvamile, izimpawu zimfushane futhi asidingi ukuqedwa ukwelashwa.
Nakuba engakwazanga ukuwaphendula ulwazi mayelana nemiphumela elimazayo zomuthi esikhathini kokubeletha kanye phakathi lactation, ukuqokwa kuyakuba ngokuqinile ngomlomo. ubuhlengikazi State kanye neziguli abakhulelwe kufanele ziqashwe nguchwepheshe.
Njengoba kuboniswa umkhuba emtholampilo, zokugula ngokwayo, lapho umuthi "Hepa-Merz" lisetshenziswa Uphatha kabi ikhono ukugxilisa ingqondo futhi uphathe izakhi eziyinkimbinkimbi noma izithuthi. Ngakho, iziguli ukuthatha izidakamizwa, leli khono ingaphinda ebucayini.
Lapho ebonisa indlela lo izidakamizwa njengoba kunqunyiwe kokudla Uchwepheshe kwenzeka. Kwezinye izimo, ematfuba wokugaya ukudla uhlelo iziyaluyalu.
Ukusetshenziswa kwezimali "Hepa-Merz" kufanele kuvunyelwane nodokotela wakho.
Umuthi "Dynamics" (100 mg, 4 amaphilisi): izibuyekezo, izithombe, incazelo, ukufundiswa kwamadoda
Umuthi 'Vilprafen': isitatimende
Eye lehla "Lyuksfen": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Russian Art Nouveau bokwakha